मलाई नेपाली हैन, नभन ? - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
मलाई नेपाली हैन, नभन ?
२०७६ बैशाख २ गते सोमवार
गायिका आस्था रावतको स्वर र सुरेश अकिारीको शब्द-संगीतले धेरै युवा पुस्तालाई समेट्छ । मलाई नेपाली हैन भन्न, कहाँ पाईन्छ : म त नेपालको माया गर्ने छोरी, मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ । बास्तमै यी, शब्दले कहिँले काहिँ धेरै सोच्न बाध्य भए ।
नयाँ बर्ष, नयाँ उमङग, नयाँ साथी, नौलो मन र कर्मभूमि : सधै त कहाँ रमाउन मिल्छ र ? जुनदिन रमाईन्छ, गाउँमै पुगेको आभास हुने गरि रमाईन्छ । प्रवासमा बस्ने अधिकाम्स पछिल्लो पुस्तामा भाषा र भेषभुषामा नेपाली पन भेटिदैन । नेपालको माया र नेपाली मन त्यहाँ भेटिन्छ, जहाँ कसैले, कहिलै मेटाउन पनि सक्दैन । नेपाली नयाँ बर्षको अबसरमा बुम्बईका बिभिन्न प्रवासी संघङसंस्थाले, प्रवासी नेपालीहरुको जमघट हुने कार्यक्रम गरे । कार्यक्रममा कतैङकतै हिन्दी लवज भएपनि, नेपाल संगीत र नेपाली सभ्यतामै हुन्छ । बारम्बार हलमा, नेपाल आमा प्रतिको आस्था गुन्जियो । जो पुग्छ, मञ्ममा नेपाली आमाको जय जयकार हुन्छ । नेपाल भूमि र नेपाली आमाको माया तनङतनमा भेटिन्थ्यो । मैले मनुष्यको शरिरमा खोजिरहेको नेपाली मन, तन मै भेटे ।
कार्यक्रमको सुरु देखि अन्त्य सम्म, कलाकारहरुले नेपाली गितमै प्रस्तुति देखाए । उनको : चौबन्दीमा पटुकी थिएन । गितको भाब र रहन सहन फरक थियो । गाँजल, टिकी राम्रै लाग्छ, तर लाउने बानी छैन, उनले दमदार तवरले यो टुक्का गाएपछि, हलमा निकै हुटिङको आवाज घन्कियो । कार्यक्रममा पुग्ने प्राय आधुनिक रहन, सहनमै थिए र हुन्छन् पनि । तर उनीहरुले सुनाउने, देखाउने कलामा मुम्बई होईन, नेपाल र नेपाली भाव देखियो र देखिन्छ पनि । आरम्भमा मैले कतैपनि नेपाली जस्ता देख्दैनथे । अबभने सबै नेपाली जस्तै लाग्यो ।
प्रवास रहर हैन, बाध्यता हो । प्रवासीको निकै मेहनत र पसिनाले जीवनस्तर केहि माथी उठेकै छ । छोराङछोरीहरु यतै जन्मिए, हुर्किए, शिक्षा आर्जन गरे । बच्चै देखि, हिन्दी र अंग्रेजी गितमा रमाएपनि, सभा, समारोहमा भने नेपालीपनाका संगीत, नृत्य देखिन्छन् । सबथोक यतैको भएता पनि मन भने नेपाली छ । चोली सुहाउछ, सालतको पात टपरी, तुल्सी आगनमा, कुटुमा कुटु बजिरहेका हुन्छन् । सबैजना थपडी मार्दै रमाईरहेका थिए । नेपाली संगीत र गफगाफमा भुलिको हल ः एकाएक शान्त भैदिन्छ । साँईली सुन्दै गर्दा, सबै मुखामुख गरिरहे । चालिस कटेसी रमाउला… । यो शब्दले जन्मभूमिको निकै यादमा डुबाएको आभास हुन्थ्यो ।
प्रवासमा हुने सबै कार्यक्रमहरुमा नेपाली संगीत मै प्रवासीहरु झुमिरहेका छन् । हामी नेपालीहरु जहाँ पुगेपनि, गाउँले र मातृभूमिको रहन, सहन भुल्दैनौ, सबैभन्दा ठुलो महानता यहि न हो । हामीहरु देश र राजनीतिक नेतृत्वलाई गाली नगरेरै , पसिना चुवाउन प्रदेशिएका हौँ । प्रवासले हामीमा अनेक रुप थिएको छ । तरपनि हामी नेपाल र नेपाली प्रतिको माया र सद्भावमै हुन्छौँ । बोली बचन र रहन सहनमा मात्रै नेपाली पन हुदैन । हामी बिच एकता, भाईचारा र सद्भाव छ । प्रवासमै बिभिन्न चाडवाड मनाउछौ । एकै ठाउँमा भएर रमाउछौ, र त आफ्नै गाउँपाखा र भुमिको याद दिलाउछ । सयौँ थुगां फुलका हामी, एउटैमा माला नेपालीबाट सुरु भएको कार्यक्रम, हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल भन्दै समापन हुन्छ ।